Dhageyso: Shir Jaraa’id oo hordhac ah oo Madaxweynaha Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedka Puntland ku qabteen Garoowe – idalenews.com
Dhageyso: Shir Jaraa’id oo hordhac ah oo Madaxweynaha Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedka Puntland ku qabteen Garoowe
Waxaa maanta si weyn Loguso dhaweyeey garoonka Diyaaradaha ee Garowe international Airport madaxwaynaha Soomaaliya Xassan Sh. Maxamuud iyo wafti uu hoggaaminayo, waxaana markii uu kasoo dagay diyaaraday ay dareen farxadeed isku gacan qaadeen madaxwaynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Maxamuud ‘Faroole’.
Inkastoo aanan si rasmi ah illaa hadda loo caddayn Karin darajooyinka iyo tirade xubnaha safarka madaxwaynaha Soomaaliya Xassan Sheekh ku wehlisay, hase ahaatee waxaa loo sameeyay maamuus qaran, waxaana salaan uu ka qaatay madaxwayne Xassan Sheekh cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta Maamulka Puntland.
Ma jirin wax ilaalo ciidan AMISOM ah oo ku wehliyay safarka madaxwayne Xassan Sheekh, waxaana aad loo adkeeyay guud ahaanba ammaanka magaalada Garowe, ee Caasimada Maamulka Puntland Oo Saaka goobaha muhiimka ah ee magaalada La Xiray.
Madaxwayne Xassan Sheekh ayaa loo galbiyay qasriga madaxtooyada Puntland ee Garowe waxaana halkaas Kulan kuwada qaatay Madaxweyne Xasan sheekh Iyo Faroole Halkaas oo Kulankooda kadib saxaafada Kula Hadleen.
Waa markii Ugu horeysay Oo u degaanada maamulka puntland u ku Yimaado madaxweynaha Jamhuurida soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Bangladesh:Burburka dhismaha magaaalo madaxda Dhaka ayaa wali laga soo bixinayaa dad (Daawo Muqaalkan)
Maamulka Somaliland oo soo dhaweeyay Iscasilaada Axmed Ismaaciil Samatar